Email Marketing Process အကြောင်း -
Email Marketing ဟာ Digital Marketing Channel တွေထဲမှာမှ Mobile Customers တွေနဲ့အလွယ်တကူထိတွေ့လို့ရတဲ့အပြင် ထိရောက်မှုရှိမရှိကိုလည်းအလွယ်တကူသိနိုင်တဲ့ Marketing နည်းလမ်းပါ။ယခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ Email Marketing မှာအရေးကြီးတဲ့ Process ငါးခုကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁. ကိုယ့်ရဲ့ Email အတွက် လိုအပ်တဲ့ Campaign တွေ Design နဲ့ Message တွေကို သက်ဆိုင်ရာစျေးကွက်ကိုအခြေခံပြီး ဖန်တီးရွေးချယ်ပါ။ တိုတိုနဲ့လိုရင်းရောက်တဲ့ပြေပြစ်ချောမွေ့တဲ့ Email တစ်ဆောင်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Email ဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Message တွေ Image Design တွေပါဝင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
၄. Mail လက်ခံရရှိသူတွေရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတိုင်းတာပြီး Track လုပ်ပါ။ Email Client တွေဒါမှမဟုတ် Mail လက်ခံရရှိသူတွေရဲ့ Activity တွေကိုသေချာစီစစ်ပါ။ကိုယ်ပို့လိုက်တဲ့ Email ကိုနှစ်သက်ရဲ့လား စိတ်ဝင်စားမှုရှိသလား ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်လဲ စသဖြင့်သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။